Maitiro ekugadzirisa iyo info inoratidzwa paApple Watch | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa iyo info inoratidzwa paApple Watch
Pablo Aparicio | | Apple Watch, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Iyo Apple Watch, sezvaunoziva, ndicho chazvino chishandiso chinosvika mumhuri yeApple. Yakatanga kusvika kune vatengi vayo musi wa24 uye isu takatarisana neyekutanga vhezheni yeizvo isu zvatingati Watch OS. Senge pakasvika iPhone yekutanga, iyo Apple Watch ine zvimwe zvaisingakwanise, kuratidza kufarira kwekambani inotungamirwa naTim Cook kuve nemagumo ese akasungirirwa pamwechete kuti atipe ruzivo rwakanakisa rwevashandisi. Pakutanga, pachave nevanhu vasingade izvi, vachida kugadzirisa zvigadzirwa kubva pakutanga, asi izvi hazvigoneke munguva pfupi.
Asi, sekuipa kudiki, Apple yaisanganisira dzimwe nzvimbo dzinobvumira imwe nhanho yekugadziriswa, ichitibvumidza kuti tishandure zvimwe zvinhu, sekufunga kuti ndeipi ruzivo iyo Apple Watch ichatiratidza uye nezvisingaite. Muchirongwa ichi tichakudzidzisa maitiro ekugadzirisa iwo mafaera anotibvumidza isu kuita dzimwe shanduko.
Takabata kaviri iyo Dhijitari Korona kuenda kunzvimbo yedu (kana tisati tatova mariri).
Tinobata nekubata chero kupi pane bhora.
Tinotsvedza kuruboshwe kana kurudyi kupururudza nemumativi aripo.
Takatamba pa Tsika (kana zviripo) kuchinja ruzivo, mavara uye zvekuwedzera. Pamusoro tichaona mamwe mapoinzi. Huwandu hwemapoinzi hunoratidza kuti zvingani zvingasarudzika zvatinogona kuwana.
Isu tinotenderera iyo Dhijitari Korona kuwedzera kana kudzikisa huwandu hwehuwandu. Kurudyi isu tichaona scroll bar iyo inotitaridza kuti mangani sarudzo dzatakasiya.
Tinotsvedza kuruboshwe kana kurudyi kuchinjira kuchiratidziri chinotevera.
Isu tinotenderera iyo Dhijitari Korona kupururudza kuburikidza nemavara aripo (kana aripo).
Tinotsvedza kubva kurudyi kuenda kuruboshwe kuchinjira kuchiratidziri chinotevera.
Takatamba mune zvimwezvo kusarudza iyo, kana iripo.
Isu tinoshandura iyo Dhijitari Korona kuprinta kuburikidza neZvakawedzera.
Isu tinobata uye tinosarudza zvimwe Zvimwe uye tinotenderera kuti tifambe pakati pesarudzo tichida.
Isu tinodzvanya iyo Dhijitari Korona kupera.
Isu tinobata chidzitiro kuti uisarudze seye nyowani nyowani.
Mifananidzo - iMore
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekugadzirisa iyo info inoratidzwa paApple Watch
Vabereki vanoshandisa Apple Watch kugovana kurova kwemoyo kwevacheche
Tora zvakadzama tarisa mashandiro eSafari paPad